QEMU 6.2 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda | Ka Linux
QEMU 6.2 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda
Xulka wararka oo dhan | | Aplicaciones
Daah-furka nooca cusub ee mashruuca ayaa dhawaan la soo bandhigay - QEMU 6.2, version kaas oo ku jira diyaarinta version cusub in kabadan 2300 oo isbadal waxaa sameeyay 189 horumariyayaal.
Kuwa aan aqoon u lahayn mashruuca, waa inay ogaadaan inuu u dhaqmo sidii ku dayasho taas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku socodsiiso barnaamij la soo ururiyey oo loogu talagalay qalabka dhismaha ee nidaamka leh qaab dhismeed gebi ahaanba ka duwan, tusaale ahaan, inaad ku socodsiiso codsiga ARM ee x86 PC ku habboon.
Xaaladda hufnaanta ee QEMU, waxqabadka fulinta koodhka deegaanka sanduuqa ayaa ku dhow nidaamka qalabka sababo la xiriira toos u fulinta tilmaamaha ku saabsan CPU iyo isticmaalka Xen hypervisor ama KVM module.
Mashruuca waxaa markii hore abuuray Fabrice Bellard si loogu ogolaado binaries Linux oo lagu dhisay x86 inay ku shaqeeyaan naqshadaha aan x86 ahayn. Sanadihii la soo dhaafay, taageero buuxda oo ku dayasho ah ayaa lagu daray 14 qaab-dhismeedyada qalabka, tirada aaladaha qalabka lagu daydo ayaa dhaaftay 400.
Wararka ugu waaweyn ee QEMU 6.2
Noocan cusub ee QEMU 6.2 ee farsamada virtio-mem, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku xidho oo aad ka saarto xusuusta mashiinnada farsamada, Taageero buuxda oo loogu talagalay qashinka shilalka martida ayaa lagu daray, nuqul ka mid ah hawlgallada ka hor iyo ka dib socdaalka deegaanka (koobi ka hor / koobiga ka dib) iyo abuurista sawirada nidaamka martida ee gadaasha.
Mid kale oo ka mid ah isbeddellada muuqda ayaa ku jira QMP (QEMU Protocol Machine) hirgelin khaladaadka DEVICE_UNPLUG_GUEST_ERROR oo ka dhacaysa dhanka martida haddii ay dhacdo guuldarrooyin inta lagu jiro hawlgallada fur kulul.
Waxaa sidoo kale la iftiimiyay in syntax ee doodaha kabaha habaysan ayaa la kordhiyay In plugins loogu talagalay koronto-dhaliyaha caadiga ah ee TCG (Tiny Code Generator), oo lagu daray taageerada nidaamyada asaasiga ah ayaa lagu daray plugin "cache".
en el x86 emulator Waxay taageertaa qaabka Intel Snowridge-v4 CPU, taageero lagu daray gelitaanka Intel SGX xayndaabyada (Software Guard eXtensions) martida isticmaalaya aaladda / dev/sgx_vepc ee dhinaca martida loo yahay iyo "xasuusta-backend-epc" ee QEMU. Nidaamyada martida loo ilaaliyo tignoolajiyada AMD SEV (khudradda qarsoon ee sugan) awood dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo bilaabista kernel-ka tooska ah (adigoon isticmaalin bootloader) (waxaa karti u leh in la dejiyo 'kernel-hashes = on' parameter to 'sev-guest').
In emulator-ka ARM nidaamyada martida loo yahay Apple Silicon waxay taageertaa habka dardargelinta qalabka "hvf". marka la bilaabayo nidaamyada martida ee AArch64.
Ee isbeddelada kale taas oo ka duwan nooca cusub:
Nooc cusub oo mashiinno la isku dayay "kudo-mbc" ayaa la hirgeliyay.
Mashiinnada 'virt' waxay ku kordhiyeen taageerada ITS (Adeegga Turjumaada Joojinta) ku dayashada iyo awoodda loo isticmaalo in ka badan 123 CPUs qaab ku dayasho.
Taageero lagu daray BBRAM iyo eFUSE aaladaha "xlnx-zcu102" iyo "xlnx-versal-virt" mashiinnada la isku dayay.
Nidaamyada ku saleysan chip-ka Cortex-M55, taageerada waxaa la siiyaa muuqaalka duubista ee Processor-ka MVE.
Taageerada hore ee POWER10 DD2.0 nooca CPU ayaa lagu daray ku dayashada qaab dhismeedka PowerPC.
Taageerada qaab dhismeedka POWER10 ayaa loo hagaajiyay mishiinada ku dayashada ah "powernv" iyo FORM2 PAPR NUMA ee sharaxaada waxaa lagu daray mishiinada "pseries".
Taageerada kordhinta habaynta tilmaamaha Zb [abcs] ayaa lagu daray RISC-V emulator-ka qaab dhismeedka. Ikhtiyaarada "hoster-user" iyo "numa mem" ayaa loo ogolyahay dhammaan mishiinada la isku dayay.
Taageerada lagu daray ee SiFive PWM (modulator ballaca garaaca wadnaha).
emulator-ka 68k waxa uu wanaajiyaa la jaanqaadka NuBus-ka la soo jeediyay ee Apple, oo ay ku jirto awoodda lagu shubo sawirada ROM-ka iyo taageerada boosaska kala goynta.
Taageero lagu daray ku dayashada qaabka processor-ka Fujitsu A64FX.
Qalabka xannibaadda qemu-nbd waxa uu leeyahay habka kaydinta oo si toos ah u kartiyeeyay ("qori caajis ah" halkii "qorista tooska ah") si uu u dhigmo habdhaqanka qemu-img.
Lagu daray "–selinux-label" ikhtiyaar si loo calaamadiyo saldhigyada SELinux Unix.
Finalmente hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato Isbeddellada iyo waxyaalaha cusub ee lagu soo bandhigay nooca cusub ee QEMU 6.2 waxaad ka hubin kartaa faahfaahinta iyo in ka badan xiriirka soo socda
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QEMU 6.2 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda
Mold, xiriiriye casri ah oo ka sarreeya dahabka GNU iyo LLVM ld
Tux Paint 0.9.27 wuxuu la yimid 6 qalab-sixir cusub iyo in ka badan